LinkedIn wuxuu awood u siinayaa Cusboonaysiinta Xaaladda Shirkadda | Martech Zone
Khamiista, Oktoobar 13, 2011 Axad, Janaayo 15, 2017 Douglas Karr
Mid ka mid ah waxyaabaha aan ka cabaadayay sanado ayaa ah in barnaamijyada baraha bulshada marwalba la dhisay iyadoo shakhsiga maskaxda lagu hayo oo aan waligeed kala sarreyn ganacsiga. Ganacsi had iyo jeer wuxuu ahaa fikir labaad maadaama codsiyada warbaahinta bulshada ay ka shaqeynayeen dakhligooda… laakiin weligeed kahor.
Nasiib wanaagse, LinkedIn ayaa toogtay tallaalkii ugu horreeyay waxayna awood u siisay awoodda dadka ku dhex jira shirkadda inay cusboonaysiiyaan a xaaladda shirkadda, halkii aad ka noqon lahayd shaqsi. Hadda waxaad raaci kartaa shirkad halkii aad ka noqon lahayd shaqsi oo waxaad ka arki kartaa cusbooneysiinta shirkaddaas! Tani waa kala tag weyn (waana mid aan jeclaan lahaa in Twitterku awood u yeesho).
Hal qoraal, si tan ay u shaqeyso, waxaad u baahan doontaa inaad awood liiska Liiska bogga faahfaahinta shirkaddaada. Taasi waa fure! Waxaan ku daray Jenn Lisak ka DK Cusub Media oo waxaan moodayay inaan si toos ah maamule u noqon doono. Maya… hada waan ka xayirmay cusboonaysiinta shirkadayda!
Argyle Bulshada: Raadinta Beddelka iyo Warbaahinta Bulshada
Oktoobar 14, 2011 at 6:46 AM
Mahadsanid - cusboonaysiin faafaahin wanaagsan!